Qoorqoor iyo Guudlaawe waxay door bideen Farmaajo iyo Fahad | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor iyo Guudlaawe waxay door bideen Farmaajo iyo Fahad
Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug, Hirshabeelle, iyo Koofur galbeed, ayaa iska indho-tiray xasaradda siyaasadeed ee dalka ka aloosan, waxayna wali ku adkeysanayaan ku sii jiridda safka Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabada uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, xilka uga qaaday Taliyihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, isla-markaana waxa ay si weyn uga soo horjeesteen go’aanka uu Madaxweynihii hore Farmaajo kaga hor yimid xil ka qaadista eedeysane Fahad.
Labada Maamul, waxa ay muddo dheer qeyb ka ahaayeen dadaallada lagu doonayo in dalka looga badbaadiyo haadaanta siyaasadeed ee uu ka dhacay, waxayna xilliyo kala duwan, si weyn uga soo hor jeesteen go’aanno gurracan oo ka soo baxay Xaafiiska Farmaajo.
Madaxweynayaasha Doowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur galbeed, oo madax u ah dadka iyo degaanka ay dhibaatada ku hayaan Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaan wali wax war ah ka soo saarin xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Qoorqoor iyo Guudlaawe, ayaa si weyn ugu dhow Fahad Yaasiin, oo dhawaan laga xayuubiyay xilkii Agaasimaha NISA, waxayna dadaal xooggan ku bixiyeen maalmihii la soo dhaafay in ay RW Rooble, ka hor istaagaan tallaaboyinka ka dhanka ah, Fahad-ka eedeysan.
Madaxda Saddexdaan Maamul ayaa dhamaantood ah maqaar-saar, ay Kooxda Farmaajo saareen kuraasta ay hadda ku fadhiyaan, mana ahan hoggaan looga bartay garab istaagga dadka dulman.